Maamuusku wuxuu soo bandhigayaa Honor 9X Pro, Magic Watch 2 iyo Magic Earbuds for Spain | War gadget
Maamuusku wuxuu soo bandhigayaa Honor 9X Pro, Magic Watch 2 iyo Magic Earbuds for Spain
Paco L Gutierrez | | Mobiles, Smartwatch
Soo saaraha Aasiya Honor ayaa maanta soo bandhigay alaabooyin cusub oo sumcad u leh dalkeenna. Iyaga ka mid ah waxaan ka heli heerka dhexe ee Honor 9X Pro, iyadoo horay loo ogaa Processor Kirin 810 oo aan lahayn adeegyada Google gudaha. Waxay noqon doontaa mid ka mid ah astaamaha astaamaha ka furaya dukaankiisa cusub dalka Spain, kaasoo shaqada ka bilaabi doona 12-ka May Ma noqon doonto waxa kaliya ee ka jira dukaankan cusub, maadaama iyagana la soo bandhigay Dhego-dhegaha Sixirka iyo Saacad-sixirka 2.
Maamuusku wuxuu horey u shaaciyey dukaankan internetka, hihonor.com kaas oo u shaqeyn doona sidii bog rasmi ah oo dalka ka mid ah iyo sidoo kale barta tixraaca ee bulshada isticmaala, tani waxay cusbooneysiin doontaa maalinta furitaanka ee 12-ka Maajo, maadaama shirkaddu horeyba uga warbixisay dhacdadii soo bandhigidda ee dhacday maanta. Websaydhkan waxaa ku jiri doona buug-gacmeedyo ballaadhan maxaa yeelay iyagu mas'uul bay ka yihiin qaybintooda waxayna bixin doonaan maraakiib bilaash ah oo loogu talagalay alaabooyinka qiimaha ka bilaabmaya .39,90 31, maadaama soo-celinta bilaashka ah inta lagu jiro XNUMX-ka ugu horreysa ee iibsiga
1 Maamuus 9X Pro: Kirin 810 iyo qiimo la jaangooyay
1.1 Faahfaahin farsamo
1.2 Naqshadeynta iyo qalabka guud ee dadweynaha
1.3 Batariga iyo softiweerka ma aanan fileynin
1.4 Dhamaan kamaradaha dhulka
2 Maamuus Magic Watch 2
3 Maamuus Earbuds sixir
Maamuus 9X Pro: Kirin 810 iyo qiimo la jaangooyay
Go'aan: 2340 x 1080
OS: Sharaf Magic UI oo ku saleysan Android 9 Pie
Hore 16 MPX, F / 2.2
GPS-ka | GLONASS | GALILEO
Nooca USB C
Akhriste xaga dambe
Accelerometer, gyroscope, sensor gravity, dhawaanshaha dareeraha, barometerka iyo compass
Naqshadeynta iyo qalabka guud ee dadweynaha
Honor 9X pro waa terminalkii ugu horreeyay ee uu soo bandhigo Honor dukaankiisa cusub, Terminalkani waa cusbooneysiinta Sharafta 9X ee la soo bandhigay sanad ka hor. Dhexdhexaad dhexdhexaad ah oo ku dhejinaya 6,59-inch IPS LCD guddi ka kooban dhammaan wejiga hore mahadnaq xaqiiqda ah inuusan lahayn nooc kasta oo qaan-gaar ah ama dalool shaashadda, taas oo ay ugu wacan tahay xaqiiqda waxay kudareysaa kamarad hore oo leh aaladda periscope. Dhabarka gadaashiisa waxaan ka helnaa muraayad dhammaystiran oo leh muuqaallo muuqaal ah oo muuqaalkeedu yahay midab guduud ah gebi ahaanbana ku siman qaabkeeda madow.
Moodelkan Pro ayaa la cusbooneysiiyay isagoo lagu dhex daray Kirin 810, oo leh 7 nidaamyada nanometerka iyo DaVinci ee qaabdhismeedka sirdoonka farsamada, kaas oo bixiya 5,6% waxqabad ka sareeya kii hore ee Kirin 710, sida ugufiican ee loo isticmaalay waxtarka tamarta. Dhinaca kale, heerka GPU-ga wuxuu ku hagaagayaa 175%, waa wax heer kulka ku jira noqon doono lagu xakameeyo qaboojinta dareeraha Maamuusku wuxuu ku dhex jiraa terminalkan, oo awood u leh inuu hoos u dhigo heerkulka 5 darajo. Sida RAM, waxay ku dartaa 6 GB LPDDR4x. Dareeraha sawirka faraha ayaa ku xirnaan doona dhabarka.
Batariga iyo softiweerka ma aanan fileynin
Waxa sida aadka ah nooga yaabiyey terminaalkan ma ahan awooddiisa farsamo, iyo maqnaanshaha adeegyada Google, ee naga tagay wax aan meesha ka jirin, waa in lagu bilaabay Android 9 Pie sida nooca nidaamka qalliinka. Wax gebi ahaanba aan la fahmi karin maanta, in kasta oo soo-saaruhu noo xaqiijinayo in terminaalku cusbooneysiin doono mustaqbalka. Waa Terminal Sharafeedkii ugu horreeyay ee yimaada Isbayn iyada oo lagu daray Huawei App Gallery. Batariga waa 4.000 Mah oo leh 10W "dhakhso" ah.
Dhamaan kamaradaha dhulka
Qalabkani wuxuu leeyahay kamarad gadaal saddex-laab leh a 48 MPX dareeraha ugu weyn, oo leh aag furan oo ah 1.8, xagal ballaadhan oo ah 8 MPX, aaladda loo yaqaan 'focal aperture' oo ah 2.4 iyo ugu dambeyn muraayadaha qoto dheer oo ay weheliyaan aaladda '2 MPX sensor' iyo focal aperture oo ah 2.4. Kaamirada hore waxaan haynaa 16 MPx shidma oo lagu qariyay aaladda periscope. Maamuusku wuxuu ku siiyay terminal-ka heerka ugu sarreeya ee waxqabadka muuqaalka, tanna waxay u oggolaaneysaa in lagu gaaro sawirro dhalaalaya iyo ISO afar jeer ka sarreeya kii ka horreeyay iyo taageerada qaabkeeda mugdiga ah "Super Night 2.0".
Maamuus Magic Watch 2
Waxaan ka hadli doonaa saacadda casriga ah ee casriga ah Honor Magic Watch 2, oo leh laba nashqadood, dhexroor ah 42 iyo 46 milimitir. Waxaa ka mid ah dial bir ah iyo batteri leh ismaamul ilaa laba toddobaad ah sida uu sheegayo soo saaraha. Daawadan ayaa adeegsanaysa processor-ka Kirin A1. Shaashadu waa 1,2-inch AMOLED marka laga hadlayo qaabka 42mm iyo 1,39-inch oo ah qaabka 46mm oo leh illaa 800 NITS oo dhalaal ah, kaas oo noo oggolaan doona inaan si dhammaystiran u eegno waxyaabaha ku jira qorraxda dhalaalaysa, sidoo kale Waxay ka kooban tahay hawsha "Had iyo jeer la soo bandhigo" taas oo noo oggolaan doonta inaan shaashadda marwalba u shaqeyno si loo hubiyo waqtiga, iyadoo la isticmaalayo tamar yar. Waxaan ku raaxeysan karnaa muusikada mahadnaqkeeda 4GB ee xusuusta gudaha.
Waxay bixisaa kormeer garaaca wadnaha ah oo shaqeyn doona marka dabaasha, taas oo ay ugu wacan tahay iska caabbinta biyaha, oo taageerta qoto dheer illaa 50 mitir. Baaskiileyda ama orodyahanada, waxay ku daraysaa GPS laba-geesood leh cabir masaafo sax ah, iyo sidoo kale 13 barnaamijyo socosho horay loo sii dejiyay iyo hawl caawimaad si loo ilaaliyo xawaaraha joogtada ah. Nooca 46mm waxaa lagu heli doonaa madow 129,90 laga bilaabo 12-ka illaa 19-ka Maajo kor u qaadista, bogga rasmiga ah hihonor.com markaa waxay noqoneysaa € 179,90. Nooca 42mm ah waxaa lagu iibin doonaa qiimo xayeysiin ah € 129,90 oo madow ah iyo € 149 oo casaan ah. Labada xaaladoodba oo ay ku jiraan dhagaha dhagaha. Marka dalacsiintu dhammaato, qiimihiisu wuxuu noqon doonaa € 169,90 iyo € 199,90 siday u kala horreeyaan.
Maamuus Earbuds sixir
Honor ayaa sidoo kale soo bandhigtay sameecadaha dhagaha ee wireless-kaLoogu talagalay jawi buuq badan, waxay ka dhigi doonaan isticmaalkooda "khibrad maqal la'aan aan kala sooc lahayn" sida uu sheegayo soo saaraha. Dhegaha Dhegaha ku dar joojinta buuqa firfircoonIyada oo loo marayo nidaam leh laba makarafoon oo maamusha in laga takhaluso illaa 27DB ee sawaxanka jawiga diyaaradaha iyo illaa 25DB marka laga hadlayo tareenka dhulka hoostiisa mara, waxay sidoo kale hagaajineysaa wadahadallada wicitaanka.
Iyada oo leh 10mm Darawal iyo Hipair teknoolojiyad, waxay xawaareyneysaa habka isku xirnaanta, sida kuwa ugu sarreeya dhammaantood ay sameeyaan, waxay leeyihiin xakameyn taabasho oo laga beddeli karo goobaha. Sameecadaha dhagaha waxaa laga heli karaa boggooda laga bilaabo Maajo 12 illaa 19 qiimaha ku jira .79,90 XNUMX dalacsiin, taas oo markii dambe u kici doonta € 99,90.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Telefoon » Mobiles » Maamuusku wuxuu soo bandhigayaa Honor 9X Pro, Magic Watch 2 iyo Magic Earbuds for Spain
Sida loo arko farshaxanka iyo dulucda hees aan lahayn barnaamijyo dibedda ah oo ku shaqeeya iOS iyo Android